चीन १२-१-16 वर्ष पुरानो लामो आस्तीन केटा टी-शर्ट PY-TC003 निर्माण र कारखाना पिन्याang
पुरुष एस कपडा
पुरुष एस ज्याकेट
पुरुष एस ट्राउजरहरू
महिला एस कपडा
महिला एस हूडी र स्वेटशर्ट
बच्चाहरु को कपडा
लामो आस्तीन -5
रेट्रो स्क्वायर कॉलर छोटो स्लीभ वूवन टी-शर्ट PY-DT004
सेक्सी खेल छोटो आस्तीन महिला टि-शर्ट PY-D प्रिन्ट गर्दै ...
जिम खेल लामो आस्तीन महिला टी-शर्ट PY-CT002
कस्टम लोगो लांग आस्तीन महिलाको हुडी PY-WW003
१००% कपास छोटो स्लीभ मेन T-Shirt PY-ND004
१२-१-16 वर्ष पुरानो लामो स्लिभ केटा टी-शर्ट PY-TC003
१२-१-16 वर्ष पुरानो लामो आस्तीन केटा टी-शर्ट
१. साना केटाहरूको लागि कस्तो प्रकारको टी-शर्ट उपयुक्त छ?
बच्चाहरूको लागि बिभिन्न र colors्गका लुगाहरू उनीहरूका लागि धेरै उपयुक्त हुन्छन् - सूर्यका किरण र मायालु बच्चाहरूका लागि मानक सामान हुन्। हामी सबै बच्चाहरूको निर्दोष र रोमान्टिक वातावरण मनपराउँदछौं, त्यसैले बच्चाहरूले लुगाको रंग चयन गर्दैनन्। यदि तिनीहरू एक छिनमा "नियमित" हुन्छन् जब तिनीहरू जवान छन्, तिनीहरूले आफ्नो रंगीन सपना गुमाउनेछन्। तिनीहरूलाई छालामैत्री र फैशनेबल टी-शर्ट चाहिन्छ, यस कपडाको रचना शुद्ध कपास कपडा हो, बच्चाहरू अक्सर खेल्दा पसिना आउँछन्, तब शुद्ध कपास उत्तम पसिना अवशोषित कपडा हो, बच्चाहरूले आरामदायक र अप्रिय रोकावट लगाउँछन्।
२ stri धारीदार टी-शर्टका फाइदाहरू के हुन्?
सेतो टी-शर्ट सरल र बहुमुखी छ, विभिन्न किसिमका र colors्गका कपडाहरूसँग मिल्न सजिलो, चमक पाउन धेरै नै सजिलो, त्यसैले गर्मीमा साना केटाहरू र आमाहरूसँग धेरै लोकप्रिय छ। उदाहरण को लागी, यो सेतो टी शर्ट सरल र अनौपचारिक छ, छेउमा चाखलाग्दो निगल बान्की डिजाइन, जसले सम्पूर्ण टी-शर्टलाई अधिक लचिलो, सरल र फैशनेबल बनाउँदछ।
यस सेतो टी-शर्टको छेउमा अनियमित डिजाइन छ। ट्र्यापेजोइडल काट्ने डिजाईनले सम्पूर्ण टि-शर्ट एकदम फरक र सेक्सी देख्दछ। यो सरल र अद्वितीय टी-शर्टले सजिलै गर्मीमा बच्चाहरूको फेशन व्यक्तित्व देखाउन सक्छ।
सेतो धारीदार टी-शर्ट, सेतो टी-शर्ट क्लासिक पट्टी बान्की डिजाइनको साथ, र त्यसपछि चाखलाग्दो डिजाईनको साथ, साधारण सेतो टी-शर्ट भन्दा यस्तो टी-शर्ट केही अधिक सुरुचिपूर्ण र कलात्मक स्वाद, फेशन र उत्कृष्ट छ।
उत्पादन प्रयोग: समूह कपडाका लागि, व्यक्तिगत अनुकूलन, आदि, र color, ढाँचा, लोगो अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न: तपाईं निर्माता वा ट्रेड कम्पनी हुनुहुन्छ?
A: हामी मूल निर्माता र manufacturer बर्षको अनुभवको साथ प्रत्यक्ष थोक व्यापारी छौं।
प्रश्न: तपाईका मुख्य उत्पादनहरू के हुन्?
एक: हामी बच्चाहरूको बुनाई कपडाको पेशेवर निर्माता हो, हाम्रो मुख्य उत्पादनहरू टी-शर्टहरू, प्यान्टहरू, सर्टहरू, स्वेटशर्टहरू, भिस्ने, ज्याकेटहरू, s र बेबी सूट ० ~ १० वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि हुन्।
प्रश्न: तपाईंको उत्पादहरूको गुणस्तर के हो?
A: हामीले राम्रो क्वालिटी र इको-मैत्री कपडाहरू अपनायौं, जो सास फेर्न र सहज छ, यो बच्चाहरूको छालाको लागि राम्रो छ। हाम्रा उत्पादनहरूले SGS गार्मेन्ट टेस्ट पास गरे।
प्रश्न: किन तपाईंको मूल्यहरू अन्य आपूर्तिकर्ताहरू भन्दा कम छन्?
एक: कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी मूल निर्माता र प्रत्यक्ष थोक व्यापारी छौं, त्यसैले हाम्रो मुल्य कम छ।
हाम्रो उत्पादनहरू कम गुणवत्ताको साथ उही गुण हुन्, राम्रो गुणको साथ समान मूल्य।
Q: म उत्पादनहरु मा मेरो लोगो हुन सक्छ?
A: हो, तपाईंसँग उत्पादनहरूमा लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। MOQ p० pcs / डिजाईन हो। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि अनुकूलन आदेशहरू।
A: यदि हालको डिजाइनहरू अर्डर गर्नुहोस् भने, तिनीहरू पठाउन तयार छन्। भुक्तानी रसिद पछि days दिन भित्र पार्सलहरू पठाइनेछ। डेलिभरी समय कुन गन्तव्य देशमा निर्भर गर्दछ
यदि अनुकूलन सेवा, निर्दिष्ट वितरण समय आईटमहरू र तपाईंको अर्डरको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
प्रश्न: बिक्री पछि गुणस्तर कसरी समस्या समाधान गर्ने?
A: समस्याहरूको फोटोहरू लिनुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी २ confirm घण्टा भित्र हामी तपाईको लागि सन्तुष्ट समाधान बनाउँदछौं जब हामी समस्याहरूको पुष्टि गर्छौं।
अघिल्लो: सेतो शिशु ट्र्याक सूट PY-YR002
अर्को: अनुकूलन ढाँचाहरू लामो आस्तीन केटा टी-शर्ट PY-TC001
१००% कपास छोटो स्लीभ केटा टी-शर्ट PY-TD002
क्रु गर्दन छोटो स्लीभ केटा टी-शर्ट PY-TD001
स्प्रिंग र फेल लांग स्लीभ केटा टी-शर्ट PY-TC002
तातो बेच्ने लामो स्लीभ केटा टी-शर्ट PY-TC004
अनुकूलन ढाँचाहरू लामो आस्तीन केटा टी-शर्ट पी ...
Q Q क्यूसेन रोड, विदेशी लगानी गरिएको औद्योगिक पार्क, झिन्जियान जिल्ला, नान्चg्ग शहर, जिiang्गक्सी प्रान्त, चीन